အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖရာရီလမ်းခွဲကို ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ…. – For her myanmar
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖရာရီလမ်းခွဲကို ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ….
Posted on December 14, 2018 December 14, 2018 Author Sugar Cane	Comment(0)
ဘယ်လို အတွေးအမြင်တွေများ ရလာနိုင်မှာလဲ?
ဒီလတွေအတွင်းထွက်လာတဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ နာမည်ဆန်းဆန်းနဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လည်းပါပါတယ်။ စာအုပ်နာမည်က ဖာရာရီလမ်းခွဲ တဲ့။ ကဗျာဆန်ဆန်ပေးထားပေမဲ့ သူက ရသဝတ္ထုစာအုပ်မျိုးတော့မဟုတ်ပဲ စိတ်ခွန်အားဖြည့်စာပေအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ဟာ မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာကနေ မြန်မာလို ပြန်ဆိုထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းစာအုပ်ကတော့ The monk who sold his Ferrari ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းစာရေးဆရာက Robin Sharma ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝကို အခြေခံရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ပါတဲ့ ယောင်းတို့ရေ…
နိုင်ငံတကာမှာလည်း အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ ဒီစာအုပ်ကို စာရေးဆရာ မိုးရှင်းက မြန်မာလို ပြန်ဆိုထားတာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီစာအုပ်ကို အက်ဒ်မင်ဖတ်ရှုပြီး ယောင်းတို့အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖာရာရီလမ်းခွဲ ဆိုတဲ့ ဒီစာအုပ်မှာ အဓိကဇာတ်ကောင်တွေက ဂျုလီယန်ဆိုတဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ရှေ့နေတစ်ယောက်နဲ့ ဂျွန်ဆိုတဲ့ လူငယ်ရှေ့နေနှစ်ဦးတို့ပေါ့။ ဇာတ်လမ်းအဖွင့်မှာ ဂျူလီယန်ဟာ တရားခွင်ထဲ ဗုန်းဗုန်းလဲသွားလို့ အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်လိုက်ရတာကနေ စထားပါတယ်။ ဂျူလီယန်ဟာ သူ့တစ်ဘဝလုံး မနေမနားအလုပ်လုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ပြီးအလုပ် ကြိုးစားရင်း အစားမမှန်၊ အအိပ်မမှန် နဲ့ အနားယူဖို့ အချိန်တောင် မယူပါဘူး။
ဂျူလီယန်ဟာ အသက်ငါးဆယ်ဝန်းကျင်ထက်မကအောင် အိုမင်းနွမ်းနယ်ပုံပေါက်နေပြီး ကျန်းမာရေးလည်း ယိုယွင်းလာတာမို့ ဒီလို ဆေးရုံတင်လိုက်ရတာပါ။ ဆေးရုံမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေကနေ လွတ်မြောက်လာတဲ့နောက် ဂျူလီယန်ဟာ လုံးဝပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ သူဟာ သူ့ရဲ့ရှေ့နေအလုပ်ကို လုံးဝဆက်မလုပ်တော့ပါဘူး။ သူတပည့် ဂျွန်အပါအဝင် အလုပ်က ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အတွေ့မခံတော့ပါဘူး။
အဲဒီလိုနဲ့ ဂျူလီယန်ဟာ ရှေ့နေလောကကနေ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပျောက်ကွယ်သွားပြီး သုံးနှစ်လောက်အကြာမှာတော့ ဂျွန်ဆီကို တစ်ညနေမှာ ဧည့်သည်တစ်ယောက်လာတွေ့ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်ဖျတ်လတ်ပုံရတဲ့ ဧည့်သည်ဟာ ဂျူလီယန်ဆိုတာသိလိုက်ရတော့ ဂျွန်တစ်ယောက် အံ့သြမင်သက်သွားပါတယ်။
နောက်ဆုံးသူတွေ့ခဲ့တဲ့ ဂျူလီယန်ဟာ ကျန်းမာရေးယိုယွင်းနေတဲ့ အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုသူမြင်နေရတဲ့ ဂျူလီယန်ကတော့ ငယ်ရွယ်သန်စွမ်းပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ ဘယ်အရာတွေကများ သူ့ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တာလဲ ? …
The Monk who Sold His Ferrari မူရင်းစာအုပ်
ဒါတွေကို ဂျူလီယန်က မခြွင်းမချန်ပြောပြပါတယ်။ သူဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ကာ ဟိမဝန္တာ တောနက်ကြီးထဲက သူတော်စင်တွေနဲ့ ဆုံတွေ့ပြီး သူတို့ဆီက အတွေးအခေါ်ပညာရပ်တွေကို ဆည်းပူးခဲ့ပါတယ်။ ဒီပညာရပ်တွေကို ဆည်းပူးစဉ်က နောင်တစ်ချိန်မှာ လူတွေဆီကိုပြန်သွားရင်း ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့ ကတိပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆည်းပူးလို့ ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ သူဟာ သူ့ကတိအတိုင်း သူ့နေရပ်ဆီပြန်လာခဲ့တာပါတဲ့။
သူလေ့လာခဲ့ရတဲ့အရာတွေကို ပထမဆုံးသူ့တပည့် ဂျွန်ဆီ လာရောက်မျှဝေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တောနက်ထဲက သူတော်စင်ကြီးတွေ ဂျူလီယန်ကို သင်ပေးခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေက ဘာတွေများလဲ၊ ဘယ်အရာတွေကများ ဂျူလီယန်ကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သလဲဆိုတာကိုတော့ မိုးရှင်းရဲ့ ဖာရာရီလမ်းခွဲဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ယောင်းရေ…
ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီး ရလာတဲ့ အက်ဒ်မင်ရဲ့ အတွေးအမြင်လေးတွေကိုလည်း ယောင်းတို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါသေးတယ်နော်။ အရင်ဆုံးသဘောကျမိတာက ဒီစာအုပ်ဟာ အောင်မြင်ရေးသက်သက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ပါပဲ။ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင် ဂျူလီယန်ဟာ အောင်မြင်ပြီးသားသူတစ်ယောက်ပါ။ အောင်မြင်ရေးစာအုပ်သက်သက်ဆိုရင်တော့ ဂျူလီယန် ဘာကြောင့် အောင်မြင်ခဲ့သလဲ၊ ဒီလိုအောင်မြင်အောင် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ခဲ့ရသလဲဆိုတာတွေ ရေးရုံနဲ့တင်ပြီးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာအောင်မြင်ပြီးသား ဂျူလီယန်တစ်ယောက် ဗုန်းဗုန်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေအထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် လူတစ်ယောက် အောင်မြင်ကြွယ်ဝရင်ပြီးပြီပေါ့လို့ တွေးစရာရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ အောင်မြင်ကြွယ်ဝရုံနဲ့လည်း ဘဝမှာ အောင်မြင်ပြီလို့ မဆိုနိုင်သေးပါဘူး။
တခြားအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကို အောင်မြင်မှုအတွက် လျစ်လျုရှုခဲ့ရင် တစ်ချိန်မှာ ဆုံးရှုံးရမှာပါပဲ။ လူတစ်ယောက်ဟာ အမြဲအောင်မြင်ရုံမက ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်နေဖို့ ကျန်းမာသန်စွမ်းနေဖို့ပါ ကြိုးစားရမှာပါ။ ဒါတွေအားလုံး ရဖို့ဆိုတာက ဘဝမှာ အရာရာဟန်ချက်ညီနေမှဖြစ်မှာပါ။ ဟန်ချက်ပျက်သွားတာနဲ့ တစ်ဖက်စောင်းနင်းတွေ ဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့နော်။
ဆိုတော့ ဖာရာရီလမ်းခွဲဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာတော့အောင်မြင်ရေးတစ်ခုကိုသာ ဦးတည်တာ မဟုတ်ဘဲ ဘဝကို ဟန်ချက်ညီအောင် ဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတာနဲ့ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာ ယူတတ်ရင် အများကြီးရမှာပါ ယောင်းတို့ရေ…
အောင်မြင်မှုအတွက် ကြိုးစားနေတဲ့ ယောင်းတို့တွေလည်း အောင်မြင်မှုဆီကို ဦးတည်ရင်း အခြားတန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတွေကို လျစ်လျူမရှုမိဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ဒီစာအုပ်အကြောင်းမျှဝေရင်းတစ်ပါတည်း အသိပေးလိုက်ပါရစေနော်။
တစ်လက်စတည်း ထပ်ပြောပြချင်တာက အရင်တစ်ခေါက်က For Her Myanmar ကနေ ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ Three Books That Changed My Life လိုပဲ ကိုယ့်ဘဝကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့၊ ကိုယ့်ဘဝကို ပြောင်းလဲပေးမယ့် စာအုပ်တွေအကြောင်းကို လူငယ်တွေ ဆွေးနွေးလို့ရနိုင်မယ့် အခမ်းအနား အစီအစဉ်လေး ထပ်မံကျင်းပပေးသွားမယ်ဆိုတာပါ ယောင်းတို့ရေ…
Books That Can Change Your Life ဆိုတဲ့ ဒီပွဲမှာ ယောင်းတို့ကိုယ်တိုင် ပြောပြပေးချင်တဲ့စာအုပ်တွေကို ပြောပြပေးလို့ရသလို အခြားမိတ်ဆွေတွေ မျှဝေပေးမယ့် စာအုပ်တွေ အကြောင်းလည်း သိရမှာပါ။ ပွဲကိုတော့ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်၊ စနေနေ့မှာ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲလေးကို စိတ်ဝင်စားလို့ တက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလင့်ခ်မှာ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါနော်။
ဘယျလို အတှေးအမွငျတှမြေား ရလာနိုငျမှာလဲ?
ဒီလတှအေတှငျးထှကျလာတဲ့ စာအုပျတှထေဲမှာ နာမညျဆနျးဆနျးနဲ့ စာအုပျတဈအုပျလညျးပါပါတယျ။ စာအုပျနာမညျက ဖာရာရီလမျးခှဲ တဲ့။ ကဗြာဆနျဆနျပေးထားပမေဲ့ သူက ရသဝတ်ထုစာအုပျမြိုးတော့မဟုတျပဲ စိတျခှနျအားဖွညျ့စာပအေမြိုးအစားဖွဈပါတယျ။
ဒီစာအုပျဟာ မူရငျးအင်ျဂလိပျဘာသာကနေ မွနျမာလို ပွနျဆိုထားတဲ့ စာအုပျဖွဈပါတယျ။ မူရငျးစာအုပျကတော့ The monk who sold his Ferrari ဆိုတဲ့ စာအုပျဖွဈပါတယျ။ မူရငျးစာရေးဆရာက Robin Sharma ဖွဈပွီး သူ့ရဲ့လကျတှဘေ့ဝကို အခွခေံရေးသားထားတဲ့ စာအုပျပါတဲ့ ယောငျးတို့ရေ…
နိုငျငံတကာမှာလညျး အောငျမွငျမှုရခဲ့တဲ့ ဒီစာအုပျကို စာရေးဆရာ မိုးရှငျးက မွနျမာလို ပွနျဆိုထားတာပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီစာအုပျကို အကျဒျမငျဖတျရှုပွီး ယောငျးတို့အတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
ဖာရာရီလမျးခှဲ ဆိုတဲ့ ဒီစာအုပျမှာ အဓိကဇာတျကောငျတှကေ ဂြုလီယနျဆိုတဲ့ အောငျမွငျတဲ့ ရှနေ့တေဈယောကျနဲ့ ဂြှနျဆိုတဲ့ လူငယျရှနေ့နှေဈဦးတို့ပေါ့။ ဇာတျလမျးအဖှငျ့မှာ ဂြူလီယနျဟာ တရားခှငျထဲ ဗုနျးဗုနျးလဲသှားလို့ အရေးပျေါဆေးရုံတငျလိုကျရတာကနေ စထားပါတယျ။ ဂြူလီယနျဟာ သူ့တဈဘဝလုံး မနမေနားအလုပျလုပျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ အလုပျပွီးအလုပျ ကွိုးစားရငျး အစားမမှနျ၊ အအိပျမမှနျ နဲ့ အနားယူဖို့ အခြိနျတောငျ မယူပါဘူး။
ဂြူလီယနျဟာ အသကျငါးဆယျဝနျးကငျြထကျမကအောငျ အိုမငျးနှမျးနယျပုံပေါကျနပွေီး ကနျြးမာရေးလညျး ယိုယှငျးလာတာမို့ ဒီလို ဆေးရုံတငျလိုကျရတာပါ။ ဆေးရုံမှာ အရေးပျေါအခွအေနကေနေ လှတျမွောကျလာတဲ့နောကျ ဂြူလီယနျဟာ လုံးဝပွောငျးလဲသှားပါတယျ။ သူဟာ သူ့ရဲ့ရှနေ့အေလုပျကို လုံးဝဆကျမလုပျတော့ပါဘူး။ သူတပညျ့ ဂြှနျအပါအဝငျ အလုပျက ဘယျသူ့ကိုမှလညျး အတှမေ့ခံတော့ပါဘူး။
အဲဒီလိုနဲ့ ဂြူလီယနျဟာ ရှနေ့လေောကကနေ လုံးဝပြောကျကှယျသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုပြောကျကှယျသှားပွီး သုံးနှဈလောကျအကွာမှာတော့ ဂြှနျဆီကို တဈညနမှော ဧညျ့သညျတဈယောကျလာတှပေ့ါတယျ။ ငယျရှယျဖတျြလတျပုံရတဲ့ ဧညျ့သညျဟာ ဂြူလီယနျဆိုတာသိလိုကျရတော့ ဂြှနျတဈယောကျ အံ့သွမငျသကျသှားပါတယျ။
နောကျဆုံးသူတှခေဲ့တဲ့ ဂြူလီယနျဟာ ကနျြးမာရေးယိုယှငျးနတေဲ့ အဖိုးကွီးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ အခုသူမွငျနရေတဲ့ ဂြူလီယနျကတော့ ငယျရှယျသနျစှမျးပွီး စိတျခမျြးမွပြေ့ျောရှငျနသေူတဈယောကျပါ။ ဘယျအရာတှကေမြား သူ့ကိုပွောငျးလဲပေးလိုကျတာလဲ ? …
The Monk who Sold His Ferrari မူရငျးစာအုပျ
ဒါတှကေို ဂြူလီယနျက မခွှငျးမခနျြပွောပွပါတယျ။ သူဟာ အိန်ဒိယနိုငျငံကိုရောကျရှိခဲ့ကာ ဟိမဝန်တာ တောနကျကွီးထဲက သူတျောစငျတှနေဲ့ ဆုံတှပွေီ့း သူတို့ဆီက အတှေးအချေါပညာရပျတှကေို ဆညျးပူးခဲ့ပါတယျ။ ဒီပညာရပျတှကေို ဆညျးပူးစဉျက နောငျတဈခြိနျမှာ လူတှဆေီကိုပွနျသှားရငျး ပွနျလညျမြှဝပေေးဖို့ ကတိပေးခဲ့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆညျးပူးလို့ ပွီးသှားတဲ့အခါမှာ သူဟာ သူ့ကတိအတိုငျး သူ့နရေပျဆီပွနျလာခဲ့တာပါတဲ့။
သူလလေ့ာခဲ့ရတဲ့အရာတှကေို ပထမဆုံးသူ့တပညျ့ ဂြှနျဆီ လာရောကျမြှဝတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ တောနကျထဲက သူတျောစငျကွီးတှေ ဂြူလီယနျကို သငျပေးခဲ့တဲ့ အတှေးအချေါတှကေ ဘာတှမြေားလဲ၊ ဘယျအရာတှကေမြား ဂြူလီယနျကို ပွောငျးလဲစခေဲ့သလဲဆိုတာကိုတော့ မိုးရှငျးရဲ့ ဖာရာရီလမျးခှဲဆိုတဲ့ စာအုပျကိုဖတျရှုနိုငျပါတယျ ယောငျးရေ…
ဒီစာအုပျဖတျပွီး ရလာတဲ့ အကျဒျမငျရဲ့ အတှေးအမွငျလေးတှကေိုလညျး ယောငျးတို့ကို မြှဝပေေးခငျြပါသေးတယျနျော။ အရငျဆုံးသဘောကမြိတာက ဒီစာအုပျဟာ အောငျမွငျရေးသကျသကျမဟုတျတဲ့အတှကျပါပဲ။ ဒီဇာတျလမျးရဲ့ အဓိကဇာတျဆောငျ ဂြူလီယနျဟာ အောငျမွငျပွီးသားသူတဈယောကျပါ။ အောငျမွငျရေးစာအုပျသကျသကျဆိုရငျတော့ ဂြူလီယနျ ဘာကွောငျ့ အောငျမွငျခဲ့သလဲ၊ ဒီလိုအောငျမွငျအောငျ ဘယျလိုအလုပျလုပျခဲ့ရသလဲဆိုတာတှေ ရေးရုံနဲ့တငျပွီးပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ လုပျငနျးခှငျမှာအောငျမွငျပွီးသား ဂြူလီယနျတဈယောကျ ဗုနျးဗုနျးလဲသှားတဲ့အခွအေနအေထိရောကျခဲ့ပါတယျ။ သာမနျအားဖွငျ့ လူတဈယောကျ အောငျမွငျကွှယျဝရငျပွီးပွီပေါ့လို့ တှေးစရာရှိပါတယျ။ တကယျတော့ အောငျမွငျကွှယျဝရုံနဲ့လညျး ဘဝမှာ အောငျမွငျပွီလို့ မဆိုနိုငျသေးပါဘူး။
တခွားအရေးကွီးတဲ့အရာတှကေို အောငျမွငျမှုအတှကျ လဈြလြုရှုခဲ့ရငျ တဈခြိနျမှာ ဆုံးရှုံးရမှာပါပဲ။ လူတဈယောကျဟာ အမွဲအောငျမွငျရုံမက ခမျြးမွပြေ့ျောရှငျနဖေို့ ကနျြးမာသနျစှမျးနဖေို့ပါ ကွိုးစားရမှာပါ။ ဒါတှအေားလုံး ရဖို့ဆိုတာက ဘဝမှာ အရာရာဟနျခကျြညီနမှေဖွဈမှာပါ။ ဟနျခကျြပကျြသှားတာနဲ့ တဈဖကျစောငျးနငျးတှေ ဖွဈကုနျတော့မှာပေါ့နျော။
ဆိုတော့ ဖာရာရီလမျးခှဲဆိုတဲ့ စာအုပျမှာတော့အောငျမွငျရေးတဈခုကိုသာ ဦးတညျတာ မဟုတျဘဲ ဘဝကို ဟနျခကျြညီအောငျ ဘယျလိုထိနျးရမလဲဆိုတာနဲ့ အောငျမွငျပြျောရှငျကနျြးမာတဲ့ ဘဝကို ပိုငျဆိုငျဖို့အတှကျ ဘာတှလေိုအပျလဲဆိုတာ လမျးညှနျပေးသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အောငျမွငျမှုအတှကျ ကွိုးစားနတေဲ့ ယောငျးတို့တှလေညျး အောငျမွငျမှုဆီကို ဦးတညျရငျး အခွားတနျဖိုးရှိတဲ့ အရာတှကေို လဈြလြူမရှုမိဖို့ လိုအပျတယျဆိုတာကို ဒီစာအုပျအကွောငျးမြှဝရေငျးတဈပါတညျး အသိပေးလိုကျပါရစနေျော။
တဈလကျစတညျး ထပျပွောပွခငျြတာက အရငျတဈခေါကျက For Her Myanmar ကနေ ကငျြးပပေးခဲ့တဲ့ Three Books That Changed My Life လိုပဲ ကိုယျ့ဘဝကို ပွောငျးလဲပေးခဲ့တဲ့၊ ကိုယျ့ဘဝကို ပွောငျးလဲပေးမယျ့ စာအုပျတှအေကွောငျးကို လူငယျတှေ ဆှေးနှေးလို့ရနိုငျမယျ့ အခမျးအနား အစီအစဉျလေး ထပျမံကငျြးပပေးသှားမယျဆိုတာပါ ယောငျးတို့ရေ…
Books That Can Change Your Life ဆိုတဲ့ ဒီပှဲမှာ ယောငျးတို့ကိုယျတိုငျ ပွောပွပေးခငျြတဲ့စာအုပျတှကေို ပွောပွပေးလို့ရသလို အခွားမိတျဆှတှေေ မြှဝပေေးမယျ့ စာအုပျတှေ အကွောငျးလညျး သိရမှာပါ။ ပှဲကိုတော့ ဒီဇငျဘာ ၂၂ ရကျ၊ စနနေမှေ့ာ ကငျြးပသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲလေးကို စိတျဝငျစားလို့ တကျရောကျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီလငျ့ချမှာ အသေးစိတျအခကျြအလကျတှေ လလေ့ာကွညျ့လိုကျပါနျော။
Tagged Book review, Knowledge, Letters from Heart, life, Motivation, Motivational Books
Posted on March 29, 2019 Author Stella
Posted on May 10, 2019 May 10, 2019 Author Sugar Cane
လက်ကမချချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် စုံထောက်ဝတ္ထုကောင်း (၂)အုပ်
Posted on April 2, 2019 June 28, 2019 Author Sugar Cane
အညွှန်းလေး ဖတ်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ချက်ချင်း ဖတ်ချင်စိတ် ပေါက်သွားမှာနော်..
ကိုယ့်အိပ်ခန်းထဲမှာ ရနံ့ဆိုးကင်းပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ လေထု ရစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် (၄) ချက်